Iitattoo zeArlo ziyamangalisa ngenxa yokwenyani kunye nefuthe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iitattoo ziye zazivelela ngokukodwa ukuba ngoku bubugcisa bobuninzi xa kumashumi eminyaka eyadlulayo yayiphantsi komhlaba. Ikwangumgangatho wabazobi be tattoo abenze olu hlobo lobugcisa ukuba luxatyiswe ngakumbi nangakumbi, ekuye amaxesha ngamaxesha sithanda ukuzisa umzobi we tattoo ubuhle obukhulu kunye neetalente ezintle.
Le yimeko ka-Arlo DiCristina, ovelisa imizobo ye-hyper -real in iseyile yomntu, ulusu. Ngengqwalaselo engakholelekiyo kwiinkcukacha kunye nokucinga okumangalisayo nokungasikelwanga mda, usithatha ngokusebenzisa iitattoos ezithile esinokuphantse sizibize ngokuba "yi-3D" ngenxa yempembelelo abayithathayo xa bejongwa kwiindawo ezithile okanye kwiimbono ezithile.
UDiCristina uyila Imifanekiso eyiyo eyiyo ezidityanisiweyo ngezinye iindlela, ezinje ngemihlaba yedolophu okanye ubunzulu bolwandle. Ngayinye yale mizobo inentsingiselo eyahlukileyo kwaye ingakhokelela kwisiphithiphithi sokwenza umbukeli acinge ukuba endaweni yokupeyintwa ngeenaliti, yenziwa ngebrashi.
Kungenxa yezithunzi ezimangalisayo kwimigca, evumela ukuba bacaphukise isiphumo esintlantlu-ntathu kwaye inokuqokelelwa kweminye yemifanekiso. Kwaye ayibonisi ukuba kufanelekile kangakanani ukubabona besenza.
UDiCristina uphefumlela abanye amagcisa ukuba benze iitattoo ezibamba amehlo, nokuba ngabazobi, abafoti kunye nabadwebi bemifanekiso eqingqiweyo. Uluhlu lwenzala yakhe luyahamba ukusuka ekupeyinteni ioyile Kwakhona ukutshiswa kweenkuni ukuvelisa zonke iintlobo zezindululo, ezisebenza njengokhuthazo lokuzisa ezo tattoos kulusu lwabo banethamsanqa lokunxiba enye.
Unsebenzi ngokuqaqambileyo kwiitattoo nganye onokuyibona kule migca. Ukuba ufuna ngaphezulu, ungaphoswa facebook wakho sele sele I-instagram yakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Eli gcisa lenza ii-tattoo ze-3D ze-realreal kunye nenkcazo